China Mgbachi ọkụ ọkụ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Mgbachi ọkụ ọkụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Mgbachi ọkụ ọkụ)
75W Mpụ ọkụ na-ekpuchi ọkụ maka ebe obibi gas
Anyị 75W kanopi Ikanam ọkụ maka Gas Stations P roviding a ụbọchị na-acha ọcha (5000K) agba nke ìhè na 8250 lumens nke mmepụta, na-anapụta-egbuke egbuke, elu-edu ìhè, enwekwu nchekwa na nche. Nke a na- eme ka ọkụ ọkụ na-enwu nwere 2 Ụdị usoro ntinye. Ịbelata ikike oriri, mmezi na ụgwọ eletrik gị site na dochie ihe...
Ikike ọkụ ọkụ 600w bọọlụ 130lm / w
Nmepụta a dị elu LED 600w Football Light 130lm / w nwere ngụgụ nke 65,000lumens. Ihe ọkụ bọọlụ LED 600w 130lm / w dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu ọkụ ọkụ Ngwuregwu Ngwuregwu Highlọ Ọrụ Ngwakọta...
Mgbachi ọkụ ọkụ Mgbapu ọkụ ọkụ Mpụga ọkụ ọkụ Agbanwuo ọkụ ọkụ Igwe ọkụ ọkụ Ejiri ọkụ ọkụ Ala na-acha ọkụ ọkụ Mgbasa ọkụ ọkụ ụlọ